Izinto ezibalulekile ukuze ibhizinisi lakho liphumelele, kuloba uNtokozo Biyela - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
KULELI sonto ngithanda sibheke izinto ezibalulekile ukuze usimamise ibhizinisi lakho; nesingazibiza ngezinsika.
Ukuqeqesha nokucathulisa, i-mentorship and coaching, kwezamabhizinisi akuyona into ejwayelekile kithina sizwe esimnyama kanti ezinye izizwe zichuma ngakho.
Emasontweni edlule kade ngiqeqesha osomabhizinisi abasafufusa ezindaweni ezihlukene kodwa okucace kakhulu wukuthi iningi labo belingenazo izinhlaka ezibalulekile emabhizinisi azo. Yingakho kule ngosi ngithi ake sibheke ukuthi wena unazo yini lezi zinhlaka?
Ukuze ibhizinisi lakho liphumelele kufanele okokuqala wena ube nombono othize ngalo. Akulula ukuthi ube nombono ngebhizinisi ungalwenzanga ucwaningo ukuthi uyalibona yini ibhizinisi lakho lima iminyaka edlula ewu-100 noma uma ubheka awuboni lidlula eminyakeni ewu-10.
Iqiniso lithi abantu abaningi abasungula amabhizinisi isikhathi esiningi ababuki ukuthi ibhizinisi labo lingama kuze kuphele iminyaka ewu-100. Angazi noma kusuke kuwuvalo yini noma wukungazethembi ukuthi le nto umuntu ayiqalayo ingasabalala umhlaba wonke ichume yaziwe wumhlaba wonke.
Uma ubheka kahle, iningi lamagama nezinkampani adumile manje onke iningi lawo kwakungamagama abantu ababephila emandulo njengami nawe. Baqala izinkampani, nokumanje zisekhona.
Wena-ke unalo iphupho elithi lelo bhizinisi lakho liyophathwa yizizukulwane eminyakeni ezayo? Kuhle ukuthi uqale ngombono ohamba uze ufike emakhulwini eminyaka. Kumele ugxile kulezi zinhlaka ezinhlanu:
Ukuphatha imali ebhizinisini;
Umthelela ibhizinisi elinawo.
Uma siqala ngokubheka uhlaka oluphathelene nabantu, ingabe uqashe abantu okuyibona yini ukuze ibhizinisi lakho lindlondlobale? Wena njengomholi unabo yini ubuholi obuqotho ekuholeni abantu obaqashile bakwazi ukubona ukuthi umbono onawo uthini, futhi kuzofinyelelwa kanjani kuwona?
Uma siza kubathengi, unazo yini izindlela ezikhona ezifanele ukuthi uzolikhangisa kanjani ibhizinisi lakho ukuze okwenzayo kufinyelele kubantu obahlosile. Ingabe umkhiqizo wakho owohlobo oluphambili yini noma okwenzayo kuyinto edingwa abantu na?
Mayelana nokuphathwa kwezimali, ngabe ukuziphatha kuhambisa ngemigomo yaseNingizimu Afrika okumele ilandelwe? Yiziphi izinto ozenzayo ukuze ukuphatha izimali ebhizinisini kube ngobunono futhi nemali iloku ingenile? Baye bathi uma ufuna ukuphumelela ngempela kufanele kube nemigudu eyisikhombisa yokungena kwemali uma uwusomabhizinisi.
Hlobo luni lwezinhlaka ozisebenzisayo ukuze ibhizinisi lakho lisebenze ngaphandle kokuphazamiseka. Ngabe ususenzile isiqinisseko sokufaka ubuchwepheshe ebhizinisini lakho? Hlobo luni lokuxhumana olusebenzisa ebhizinisini lakho ukuze abantu basheshe baxhumane noma izinhlaka ezahlukene zebhizinisi zisebenzisane?
Ingabe ibhizinisi lakho linomthelela omuhle noma omubi emhlabeni? Siyazi izinkampani eziningi kufanele zigweme ukukhiqiza intuthu ecekela phansi umkhathi noma engcolisa imvelo.
Ngabe ibhizinisi lakho ungakanani umthelela elinawo ekusizeni abantu abantula imisebenzi? Ingabe ikhona imali noma izinsiza ibhizinisi lakho elizihlinzekela abaswele?
Lezi zinhlaka zonhlanu yizona ezibalulekile kakhulu ekumiseni ibhizinisi elizosimama iminyaka eyodlula ngaphezu kwewu-100. Kuhle ukuthi noma usunalo ibhizinisi uzibuze uziphendule ukuthi ngabe zonke lezi zinhlaka zikhona, zimile na noma awukaze nangelilodwa ilanga wacabanga ukuzibheka?
Kuhle ukuthi singabantu abamnyama siqale manje sakhe amabhizinisi ayosimama iminyakanyaka ezayo. Siyeke ukuthi uma lowo owasungula ibhizinisi efa nebhizinisi liphele nya. Kwakukudala lapho, manje sesinolwazi olwanele.
Kufanele senze isiqiniseko sokuthi laba abasondelene nathi bayazi ukuthi kwenzekani ebhizinisini futhi kubalulekile ukuthi siqeqeshe umuntu okuyothi mhlazane sithatha umhlalaphansi kube wuye othatha izintambo aqhubeke nawo umbono wakho.
Qala ibhisinisi lakho, ulakhe ukuthi lime ngaphezu kweminyaka okungenani ewu-100.